Kushungurudzika Kwemwaka - Tsananguro, Zviratidzo, uye Kurapa
Matsutso ndiyo nguva inoshungurudza yegore. Sei? Zvinotaridza sekunge zvese zvakapoteredzwa zviri kuwana mavara akajeka, mashizha anowira pasi petsoka, hainyanye kupisa uye unogona kubata nemufaro kuratidzwa kwako mumatope. Asi havazi vese vanofara neichi chimiro, uye vanotodzvinyirira vamwe.
Ndiwo chete mamiriro echisikirwo anokanganisa manzwiro mukudonha? Nei kushushikana kwemwaka kuchionekwa senge kwakanyanya? Ndezvipi zvinhu zvinokanganisa kutaridzika kwayo uye ndedzipi nzira dzekutarisana nazvo? Kutanga, iwe unofanirwa kuona kuti chii chinonzi depression.
Zvinoenderana nemaduramazwi anotsanangudza, kushushikana mamiriro mune anoonekwa kusagadzikana kwepfungwa. Kukundikana kwemanzwiro uye simba, matambudziko ekurara, kushushikana, kusava nehanya, kudonha mukuzviremekedza uye kazhinji pfungwa dzekuzviuraya dzinogona kuratidza kuvepo kwekuora mwoyo
Nekudaro, mune dzimwe nguva, mamiriro akadaro anogona zvakare kuve kuita kwechinguvana kuzviitiko zvakasiyana zvehupenyu. Kushungurudzika mune kwayo pfungwa kazhinji kunotora kweanopfuura mavhiki maviri uye kunogona kutorerwa, kutotamira muchikamu chehurwere hwepfungwa.
Mwaka wekugona kuwedzera
Zvinoenderana nehuwandu, makumi mana muzana yevanhu vanobatwa nekushushikana kwemwaka, uye inopfuura hafu yavo vakadzi. Chimwe chezvikonzero zvikuru zvedata rakadai, vanachiremba vanoshevedza nguva yekuchinja. Mukudonha, zuva rinova pfupi, uye nekudaro muviri hauna mwenje wakakwana.
Iko kukundikana mukugadzirwa kwehormone yekurara (melatonin) uye iyo hormone yemufaro (serotonin). Chimwe chikonzero chemuviri chekuonekwa kwekudonha kushushikana kuderera kwakapinza kwemavitamini mumuviri, kunowanikwa kuburikidza nechikafu.
Kuonekwa kweblues, pamusoro pezvemuviri uye zvakasikwa zvinhu, zvinogona zvakare kukanganiswa nezvimwe zviitiko. Mushure mezvose, matsutso zvakare inguva yekupera kwezororo uye zororo, iyo nguva yekupfupisa mhedzisiro pamberi pegore idzva, nguva yekushandura chimiro chekupfeka, zvichingodaro. Mune vakadzi, mahormonal zvinhu uye zvakapetwa mutoro (imba pamwe nebasa) zvinowedzerwa kune zvese izvi.
Zviratidzo zvakajairika zvekushungurudzika muvakadzi nevarume zvakafanana. Zvisinei, kuratidzwa kwayo kuvakadzi kunoratidzwa, sekutonga, mune yakasuruvara uye yakashushikana mamiriro, nepo kune varume vari mukuora mwoyo, kuratidzwa kwekushatirwa uye hasha hunhu.
Pakati pezviratidzo zvese zvekupera kwekuora mwoyo, zvinotevera zvinowanzo kusiyaniswa:
blues, kushaya manzwiro;
kusava netariro uye kusuruvara;
kusava nehanya nezviitiko zvaimbodiwa;
kushaya hope uye kukotsira;
kuiswa kwemurwere kwake ega.
Kunyangwe uchifunga nezve zvinogona kuitika zvenguva pfupi zvezviratidzo izvi, kurwa kwadzo kunofanirwa kutanga nekukurumidza sezvazvinogona kudzivirira kukura kwenzira dzakanyanya dzekushungurudzika. Nokuti iye, kufanana chero chirwere, zvinoda kurapwa nenguva.
Munguva yedu, zvinotendwa zvisizvo izvozvo kuora mwoyo Chirwere chakapararira nguva pfupi yadarika. Muchokwadi, kunyangwe munguva dzekare, zviratidzo zvayo zvakarondedzerwa zvakafanana.
Saka, Hippocrates pane imwe nguva akavapa zita rekuti "kushushikana" uye akaburitsa pachena kuti mamiriro evarwere anoenderana nemwaka nemamiriro ekunze, uyezve kuti huwandu hwakakwana hwechiedza chezuva hunoporesa. Kusvikira nhasi, phototherapy ichiri nzira huru yekubata nekupera kwekuora mwoyo.
Kuti ubatsire muviri wako kukurira kushushikana pachako, unofanira kutevedzera mitemo mishanu:
Maitiro akajeka ezuva nezuva - hapana kukurumidza kumuka uye kunonoka kurara.
Chikafu chine huwandu hwakawanda hwevhithamini uye serotonin (chizi, chokoreti, maonde, mabhanana, mimwe michero nemiriwo).
Hupenyu hwekushingaira (kufamba, mitambo, kurovedza muviri, nezvimwewo).
Kuratidzwa kwekunze kwakaringana.
Kuwana manzwiro akanaka nguva dzose.
Kurwisa matsutso blues, zvinokurudzirwa:
chinja kunwa tii nekofi masikati, uchitsiva nejusi mumaawa emangwanani, uye mukaka unodziya kana cocoa manheru;
shandisa macitrus-anonhuwirira zvigadzirwa zvemangwanani shawa rako;
kudzikisira kuve wega, kusarudza yemitambo uye bhaisikopo, kudya kwemhuri, kusangana neshamwari uye zvimwe varaidzo yezororo;
ipa kusarudzika kune yakajeka mavara pakusarudza mbatya uye mukati mezvivakwa;
tsvaga hobby nyowani inobatsira, semuenzaniso, yoga.
Inofanira kuyeukwa kuti zvachose zviratidzo zvekuora mwoyo kwemwaka zvinogona kuratidza kuvepo kwezvirwere zvakasiyana. Naizvozvo, zvinodikanwa kuti utsvage kuraira kwenyanzvi. Kunyanya nekureba kwenguva yeblues uye kusavapo kwekuvandudza.
Iva nenguva yakanaka yematsutso uye yakanaka!
Postpartum kushushikana: zviratidzo, zviratidzo, zvikonzero
Muviri-wakanangana nehurapi hwekurovedza muviri: kwekutya kutya, kwekushushikana
Mibvunzo ye61 mu database yakagadzirwa mu 33,278 masekondi.